2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu
2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu
Ukuphuka kungenye yezimo ezijabulisa kakhulu emakethe ye-forex. Kuyajabulisa kulabo abasohlangothini lwesokunene lwezohwebo, ithuba elilahlekile kulabo abangakwazanga ukuthatha ukuhweba, kodwa kubuhlungu kwabanye balabo abasehlangothini olungalungile lohwebo.
Esinye sezihluthulelo zokuphuma kokuhweba ngempumelelo ukulindela. Ngakho-ke, sikubona kanjani ukuphuma okuzayo kungakenzeki?
I- 2 I-MA MACD Breakout Forex Trading Strategy isu elisiza abathengisi ukuthi babone ukuqondiswa kokuphuma okungenzeka kanye nokuvela okungenzeka kuphume. Isebenzisa izinkomba ezizosisiza sikhombe umkhombandlela wokuhweba nokuqinisekiswa kokuphuma.
Umtshina Wemakethe ye-MACD Flat
1 Umtshina Wemakethe ye-MACD Flat
2 2 MA Crossover BO
4.3 Indlela ukufaka 2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu?
I-MACD Flat Market Detector iyinkomba yangokwezifiso esekelwe ku-Moving Average Convergence and Divergence (MACD).
I-oscillator yomfutho ebalwa ngokuya ngomehluko phakathi kwezilinganiso ezimbili ezihambayo. Umehluko ube usuklanywa njengamabha we-histogram oscillate azungeze i-midpoint zero. Imigoqo evumayo ikhombisa ukuphakama ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa ukwehla.
I-MACD Flat Market Detector iguqulwa ukuze imigoqo ye-histogram ishintshe imibala kuye ngokuthi umkhuba uyaqina noma uya buthaka. In an uptrend, Ama-histograms anemibala eluhlaza okwesibhakabhaka akhombisa ukuthambekela okuqinisayo ngenkathi ama-histograms abomvu ekhombisa ukwanda kwamandla. Okuphambene nalokho kuyiqiniso ku-downtrend. In a downtrend, imigoqo ebomvu ikhombisa ukwehla kwezinga eliphansi kanye nemigoqo eluhlaza okwesibhakabhaka ekhombisa ukwehla kwamandla.
I-MACD Flat Market Detector nayo inolayini ovundlile onamandla okhombisa ukuthi ukuthambekela kunamandla noma kubuthakathaka. Amabha awela ngale kwalezi zimaki ezivundlile angakhombisa ukuthambekela okuqinile, kodwa-ke futhi kungasho ukuthi imakethe ingaguqula noma kunini ngoba isivele ikhuliswe ngokweqile.
2 MA Crossover BO
2 I-MA Crossover BO iyinkomba elandelayo enikeza amasiginali wezohwebo ngokususelwa ekuguqulweni kwethrendi yesikhashana.
Le nkomba isuselwa kumqondo olula kakhulu - i-crossover esezingeni eliphakathi nendawo. Ngokuyisisekelo ihlinzeka ngezimpawu zokuhweba noma nini lapho ithola i-pair engaphansi ehambayo ewela ngaphesheya. Ukulungiswa kwesilinganiso sokuhamba kungalungiswa ngokuya ngokuthanda komthengisi. Abahwebi babekwazi ukuzivumelanisa nobude bezilinganiso ezihambayo nohlobo lwezilinganiso ezihambayo ezisetshenziswayo.
Inkomba ikhomba ukuhlehla kwethrendi ngokubeka umcibisholo kukhandlela lapho ithola khona ukuhlehla kwethrendi, ekhomba ukuqondiswa kwethrendi.
Le nkomba ingasetshenziswa njengesiginali yokuqalisa ukuqinisekisa ukungena kokusetha kwezohwebo.
Lelisu lokuhweba lidayisa ama-breakout kwizisekeli ezidayiswayo kanye nokumelana okuhambisana nomkhuba wesikhathi eside.
Ukukhomba umkhombandlela wezohwebo, isilinganiso esingu-200 sezikhathi zokuhamba okulula (Isikolo sebanga eliphezulu) isetshenziswa njengesihlungi sokuhweba. Ukuqondiswa kwezohwebo kufanele kube lapho kuthambekela khona ngokuya ngendawo yentengo maqondana ne- 200 Isikolo sebanga eliphezulu. I- 200 I-SMA kufanele futhi ixegise ohlangothini lomkhuba okhombisa ukuthi imakethe iyathambekela ngempela. Ukubukeka, isenzo sentengo kufanele futhi sihambe ngokuya ngokulandelana kokuphakama kokuphakama nokwehla.
Uma izimo zomkhuba ziqinisekisiwe, khona-ke imakethe iyabonwa uma yenza ukubuyela emuva kancane kancane. Uma ibuyela emuva kancane, lapho-ke kufanele sibheke ukuthi ngabe ukwesekwa okuhambisanayo noma ukumelana kwakheka.
Ama-trades athathwa ngokususelwa ekuphumeni okuvela ekusekelweni kwe-diagonal noma ukumelana. Okufakiwe bese kuqinisekiswa ngokususelwa lapho kuhlangana khona i-MACD Flat Market Detector kanye ne 2 Inkomba ye-MA Crossover BO.
Kumtshina weMakethe ye-MACD Flat, inhlamvu izosuselwa ekushintsheni umbala kwemigoqo. Umkhuba kuMtshina Wemakethe ye-MACD Flat Market kuya ngokuthi imigoqo inhle noma ayibi, kufanele ivumelane nethrendi ku- 200 Isikolo sebanga eliphezulu.
I- 2 Isibonisi se-MA Crossover BO sizoba isiqinisekiso esingeziwe. Ama-trades azothathwa ngokushesha nje lapho umcibisholo uphrintiwe ukhomba ukuqondiswa kokuphuma.
Umhlahlandlela we-MACD_FlatmarketDetector (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
2MA Crossover BO
I- 200 Ulayini we-SMA kufanele ube phezulu.
Intengo kufanele yakhe ukuphakama okuphezulu nokuphansi.
Intengo kufanele ibuyele emuva kancane.
Umugqa wokumelana ohlangene kufanele ubonwe ekubuyiselweni kabusha.
Imigoqo ye-MACD Flat Market Detector kufanele ibe yinhle.
Imigoqo ye-MACD Flat Market Detector kufanele ishintshe ibe yi-dodger blue.
I- 2 Isibonisi se-MA Crossover BO kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phezulu.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo ye-MACD Flat Market Detector ishintsha ibe bomvu.
I- 200 Ulayini we-SMA kufanele wehle phansi.
Intengo kufanele yakhe ukuphakama okuphansi nokwehla.
Umugqa wokusekela ohlangene kufanele ubonwe ekubuyiselweni kabusha.
Imigoqo ye-MACD Flat Market Detector kufanele ibe yimbi.
Imigoqo ye-MACD Flat Market Detector kufanele ishintshe ibe bomvu.
I- 2 Inkomba ye-MA Crossover BO kufanele iphrinte umcibisholo okhombe phansi.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo ye-MACD Flat Market Detector ishintshela ku-dodger blue.
Leli qhinga lokuphumula liwuhlobo oluhle kakhulu lwecebo lokuphuma. Ezandleni ezifanele, leli qhinga lingaba nenzuzo enkulu.
Ukuhweba ekuphumeni okuvela ekubuyiseleni kabusha isu elisetshenziswa kabanzi. Abathengisi abaningi benza lokhu ngezindlela ezahlukahlukene zokuhweba. Abanye abathengisi bathengisa lokhu njengengxenye yokusetha ipeni noma ifulegi, abanye abathengisi bakudayisa njengokuqhekeka okulula kokusekelwa noma ukumelana okuvundlile. Abanye abathengisi bayidayisa eshadini elinqunu, ngenkathi abanye behweba ngokususelwa ekuqinisekisweni kwenkomba yezobuchwepheshe.
Lelisu lisebenzisa izinkomba zobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuphuma. Kwezinye izimo, kuzoba nokufakiwe okubambezelekile, kepha lokhu kusivumela ukuthi sinembe kakhudlwana kuma-setups wethu wezohwebo njengoba ukungena kususelwa esimweni senhloso yokuqalisa.
Uma kuthengiswa ngenqubo enhle yokuphatha ezohwebo, leli qhinga kufanele likhiqize imiphumela emihle.
2 I-MA MACD Breakout Forex Trading Strategy iyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
2 I-MA MACD Breakout Forex Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka 2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula 2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu.zip
Iya kwesokudla ukukhetha 2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu
Uzobona 2 I-MA MACD Breakout Forex Trading Strategy iyatholakala kushadi lakho
Isiqephu esedluleI-Double Zigzag - Isikhombi Esingacacisiwe se-MT4
Isihloko esilandelayoI-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
I-Super Signals Inkomba ye-MT4
I-RSI ku-MA Inkomba ye-MT4
Inkomba Ye-Dynamic Trend Cleaned Up ye-MT4
Januwari 23, 2022
Isikhombi se-MT5 se-CCI Hull esihlungwe ngaphambili
Januwari 22, 2022
Hull MA Chimp Forex Ukuhweba Isu
Januwari 21, 2022
Izinkomba ze-Forex MT54410
Amasu we Forex1127
Amakomidi e-Forex - Januwari 23, 2022 0